विश्लेषक – Himalaya Television
सरकारको ३ वर्षे कामलाई विश्लेषकले दिए १५ नम्बर (भिडियो कुराकानी)
४ फागुन २०७७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ३ वर्षमा अभुतपूर्व काम गरेको दावी गर्दै आउनु भएको छ । के प्रधानमन्त्रीको दावी अनुसार सरकारले काम गरेको छ त ? यस बारेमा हामीले राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यसँग कुराकानी...
राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणीः प्रम ओली फेरि एक्लै हिंड्न खोजे, अब विवाद बढ्छ (भिडियो)
२९ असोज, २०७७ काठमाडौं । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टिका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पूनर्गठन गरेपछि नेकपाभित्र विवाद बढ्ने देखिएको छ । भित्रैबाट कतिपयले अनुसार ओलीको पुरानै शैली कदम र...
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति सत्ता बचाउने अन्तिम तुरुपः विश्लेषक पोखरेल
१४ असार, २०७७ काठमाडौं । नक्सा छापेका कारण भारतले हटाउन खोज्यो भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेले सत्ता बचाउने अन्तिम तुरुप भन्नुभएको छ । ट्वीटर मार्फत पोखरेलले ओलीको अभिव्यक्तिमा प्रतिक्रिया दिनुभएको । सचिवालय बैठकको निर्देशनपछि...
के हो भारतसँगको सीमा विवाद ? कसरी समाधान हुन्छ ? के भन्छन्–विश्लेषक
नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय सीमा विवाद पुनः चर्केको छ। नेपाली भूमिसहित भारतले नक्सा जारी गरेपछि चुलिएको सीमा विवाद नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेपछि झनै नयाँ मोडमा पुगेको छ। सीमा विवाद वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै नेपालले आफ्नो...